सगरमाथाको नाम फेर्ने जी न्युजको अभियान : ‘अब माउन्ट एभरेस्टमा भारतले दाबी ठोक्नुपर्छ’ – नेपाली सूर्य
January 13, 2021 Nepali SuryaLeaveaComment on सगरमाथाको नाम फेर्ने जी न्युजको अभियान : ‘अब माउन्ट एभरेस्टमा भारतले दाबी ठोक्नुपर्छ’
मेरोअगाडि माउन्ट एभरेस्ट छ । मलाई विश्वासै लागेको छैन कि हामी यति नजिक आउन सक्छौँ । यो माउन्ट एभरेस्टको सबैभन्दा नजिकको बिन्दु हो । यसवेला हामी १७ हजार पाँच फिट उचाइमा छौँ । यस भागलाई कालापत्थर भन्छन् । यहाँ पछाडि हाम्रो हेलिकोप्टर छ । हामी हेलिकोप्टर लिएर यहाँ आयौँ । यो ठूलो कुरा हो । हामी यति उचाइमा छौँ कि मलाई सास फेर्न पनि कठिन भएको छ । हामी यहाँ बिल्कुलै एक्लै छौँ । हाम्रो आसपास अरू कोही छैन । म छु, मेरो क्यामरापर्सन छन् । हाम्रो पाइलट पनि छन् । तर, उनी हेलिकोप्टरमै छन् । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
म आज राधानाथ सिकदरलाई याद गर्दछु । तपाईंहरू सबैको तर्फबाट, पूरै भारतवासीको तर्फबाट । उनले नै यो शिखरलाई पहिलोपटक मापन गरेका हुन् । यति ठूलो काम उनले गरे । त्यसैले माउन्ट एभरेस्टको नाम माउन्ट सिकदर हुनुपर्छ ।’ ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
‘हा. हा. हा., म पनि तपाईंसँग केही पल बिताउन चाहन्छु, ता कि तपाईंको बारेमा थप जान्ने मौका पाइयोस् ।’ ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
मोटरसाइकलमा सवार ३० बर्षका वीरेन्द्र भण्डारी यस सन्सारबाट सदाका लागि विदा भए !
कोरोना संक्रमणको कारण एकदिनको अन्तरालमा दाजुभाइको मृत्यु